Huizhou 10 taona tsingerintaona
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-04-21
Shanghai Huizhou Industrial Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 19 aprily 2011. Nandalo folo taona, teny an-dàlana, tsy afa-misaraka amin'ny asa mafy ataon'ny mpiasa Huizhou io. Tamin'ny fankalazana ny faha-10 taona dia nanao ny fankalazana ny faha-10 taonan'ny MeMe ...
Ho avy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy
avy amin'ny admin tamin'ny 08-03-21
Izy io dia sehatry ny lohataona mamirapiratra sy manintona. Marsa faha-8 isan-taona dia festival manokana ho an'ny vehivavy. Amin'ny maha fetibe iraisam-pirenena azy dia andro lehibe fankalazana manerantany ny vehivavy. Shhaihai Huizhou Industrial Co., Ltd. dia nanomana fanomezana fety ho an'ny vehivavy am-behivavy rehetra ...
Hetsika fitsangatsanganana amin'ny ririnina
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 05-12-20
Na dia tsy misy voninkazo aza amin'ny volana Desambra, dia safidy tsara ny maka rivotra lalina, mahatsapa ririnina ary mankafy ny fotoana. Toerana kanto, voajanahary ary vaovao. Mifanaraka amin'ny nofinofin'ny mponina an-tanàn-dehibe ny hiverina any ambanivohitra ary manenjika ny fahatsiarovana an'i Jiangnan. Antenaina fa ...
Hetsika fananganana ekipa any Zhujiajiao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 25-07-20
Taorian'ny lalao manafana dia mizara ekipa volomboasary, ekipa maitso ary ekipa mavokely ny tsirairay. Nanomboka ny lalao, lalao fihazakazahana, lalao fihazana harena, natambatra ho iray sy lalao isan-karazany mahaliana. Ny sasany amin'ireo lalao dia mety miankina amin'ny fahaizan'ny fanatanjahan-tena, ny sasany amin'izy ireo dia mety miankina amin'ny sasany ...